Impi ye-1812 iMpi yase-Queenston Heights
Umlando namasiko Izimpi Nezimpi
Impi ka-1812: Impi ye-Queenston Heights
Ukungqubuzana & Usuku
I-Battle of Queenston Heights yalwa no-Okthoba 13, 1812, phakathi neMpi ka-1812 (1812-1815).
Amandla & Abalawuli
UMnuz General Stephen van Rensselaer
Amadoda angu-6 000
Omkhulu uGeneral Isaac Brock
Omkhulu uGeneral Roger Hale Sheaffe
Amadoda angu-1 300
Impi ye-Queenston Heights Background
Ngokuqothulwa kweMpi ka-1812 ngoJuni 1812, amabutho aseMelika aqala ukushayela phansi ukuhlasela eCanada. Ngenhloso yokushaya emaphuzu amaningana, imizamo yaseMelika yabe isengozini lapho uBrigadier General William Hull emnika uDetroit kuMaja Jikelele u-Isaac Brock ngo-Agasti.
Kwesinye indawo, uHenry Henry Dearborn wahlala engenzi lutho e-Albany, NY esikhundleni sokuthuthela phambili ekuthunjeni i-Kingston kanti uGeneral Stephen van Rensselaer wagxila emngceleni waseNiagara ngenxa yokungabi namadoda nezinto.
Ebuyela eNiagara kusukela empumelelweni yakhe eDetroit, u-Brock wathola ukuthi umphathi wakhe, uLieutenant General Sir George Prevost wayala amabutho aseBrithani ukuba athathe isikhundla sokuzivikela enethemba lokuthi ingxabano ikwazi ukuxazululwa ngokubambisana. Ngenxa yalokho, i-armistice yayiseNiagara evumela uVan Rensselaer ukuba athole ukuqiniswa. Umphathi omkhulu eNigeria, uVan Rensselaer wayengumholi wezombusazwe owaziwayo owamiswa ukuba aqondise ibutho laseMelika ngezinhloso zezombangazwe.
Ngenxa yalokho, izikhulu eziningana ezivamile, njengeBrigadier General Alexander Smyth, eyala eBuffalo, zazinkinga ngokuthatha imiyalo evela kuye. Ngesikhathi sokuphela kwesandla sokuzivikela ngo-Septhemba 8, uVan Rensselaer waqala ukwenza izinhlelo zokuwela uMfula i-Niagara kusukela esihlalweni sakhe eL Lewiston, NY ukuze athathe umuzi wase-Queenston nasezindaweni ezikude.
Ukusekela lo mzamo, uSyyth wayala ukuba awele futhi ahlasele i-Fort George. Ngemva kokuthola ukuthula okuvela kuSmyth, uVan Rensselaer wathumela amanye amacala afuna ukuba alethe amadoda akhe eL Lewiston ngokuhlaselwa okuhlangene ngo-Okthoba 11.
Nakuba uVan Rensselaer esilungele ukushaya, isimo sezulu esibi senze umzamo usuhlehlisiwe futhi uSyyth ubuyele eBuffalo namadoda akhe ngemuva kokulibaleka emgwaqweni.
Njengoba ebonile lo mzamo ohlulekile futhi wathola imibiko yokuthi abaseMelika bangase bahlase, u-Brock wakhipha ama-oda ombutho wendawo ukuba aqale ukwakha. Okubaluleke kakhulu, amabutho amabutho aseBrithani ayehlakazekile ubude bomngcele waseNiagara. Ngesimo sezulu esivumayo, uVan Rensselaer wakhetha ukwenza umzamo wesibili ngo-Okthoba 13. Imizamo yokwengeza amadoda angama-1 700 akwaSmyth ahluleka lapho etshela uVens Rensselaer ukuthi akakwazi ukufika kuze kube ngumhlaka-14.
Inhlekelele ezindaweni eziphakeme
Ukuphikisa ukuthuthukiswa kwamaMelika kwakuyizinkampani ezimbili zamabutho aseBrithani kanye nezinkampani ezimbili zaseJyrie, kanye nenkampani yesithathu yaseBrithani ezindaweni eziphakeme kakhulu eningizimu. Leli yunithi yokugcina yayinesibhamu esingu-18-pdr kanye nomdaka owawubhekene ne-redan half up up the high. Enyakatho, izibhamu ezimbili zafakwa eVrooman's Point. Nge-4: 00 ekuseni, umkhumbi wokuqala wezimoto uhambele ngaphesheya komfula ngaphansi kobuholi bukaColonel Solomon van Rensselaer (i-militia) noLieutenant Colonel John Chrystie (ovamile). Izikebhe zikaCol. van van Rensselaer zafika kuqala futhi abaseBrithani bavusa ngokushesha i-alamu.
Ehamba ukuvimbela ukufika kweMelika, amabutho aseBrithani ngaphansi kweCaptain James Dennis avula umlilo. UColonel van Rensselaer washeshe washaywa futhi waqedwa.
UCaptain John E. Wool we-13 US Infantry wathatha futhi waphonsela emzaneni ngosizo lwezinqola zaseMelika ezidubula emfuleni. Njengoba ilanga liphuma, amabutho aseBrithani aqala ukudubula ezikebheni zaseMelika ngenomphumela omuhle. Ngenxa yalokho, uChrystie akakwazanga ukuwela lapho abakwa-boat crew behlupha futhi babuyela eNew York. Ezinye izakhi zomswakama wesibili uLieutenant Colonel John Fenwick zaphoqelelwa phansi lapho zithathwe khona.
E-Fort George, u-Brock, wayekhathazekile ngokuthi ukuhlaselwa kwakuyizinto ezihlukumezayo, wathumela izintambo ezimbalwa e-Queenston futhi wahamba lapho ukuyobona isimo sakhe. Emzaneni, amabutho aseMelika ayekhona emgqeni omncane ngasemfuleni yizikhali zomlilo. Nakuba ayemele, uColonel van Rensselaer wayala u-Wool ukuthatha inqwaba yamanzi, ukhuphuke phezulu, futhi uthathe i-redan ngemuva.
Efika e-redan, u-Brock wathumela inqwaba yamabutho ekulondoloze phansi emthambekeni wokusiza emzaneni. Ngenxa yalokho, lapho amadoda eWool ehlaselwa, u-Brock waphoqeleka ukuba abaleke futhi abaseMelika baqala ukulawula izibhamu nezibhamu.
Ukuthumela umlayezo ku-Major General Roger Hale Sheffe e Fort Fort, Brock ucele ukuqinisekiswa ukuvimbela ukufika kwamaMelika. Ngenxa yesimo sokulawula sika-redan, ngokushesha wanquma ukuyibuyisela kabusha nalabo bantu abasesandleni. Eqhubekela phambili phambili izinkampani ezimbili ze-49th Regiment kanye nezinkampani ezimbili zase-York, u-Brock ukhokhise izinyathelo eziphakanyiswe ngu-assist-de-camp uLieutenant Colonel John Macdonell. Ekuhlaselweni, u-Brock wabulawa esifubeni wabulawa. Nakuba kuningi, i-MacDonell yacindezela ukuhlaselwa futhi yaxosha abaseMelika emuva ekugcineni kwezingqimba.
Ukuhlaselwa kweBrithani kwehluleka lapho iMacDonell ishaywa. Ukulahlekelwa umonakalo, ukuhlasela kwawa futhi abaseMelika bawaphoqa ukuba babuyele e-Queenston baya ePurham's Farm, ngaseVrooman's Point. Phakathi kuka-10: 00 ekuseni no-1: 00 ekuseni, uMnuz. Gen. van Rensselaer wasebenza ukuhlanganisa isikhundla esihlangothini lwaseCanada lomfula. Eyala iziqhingi ukuba ziqinisekiswe, wabeka uLieutenant Colonel Winfield Scott ngokuya noBrigadier General William Wadsworth eholele ezombusazwe. Naphezu kwempumelelo, isikhundla sikaVan Rensselaer sasiqine ngoba amadoda angu-1 000 kuphela ayedlulile futhi ambalwa ayesezinyunithi ezihlangene.
Cishe ngo-1: 00 ekuseni, ukuqinisekiswa kwamaphoyisa kwafika kusuka eFort George, kuhlanganise nezikhali zaseBrithani. Ukuvula umlilo kusuka emzaneni, wenza ukuwela umfula unobungozi.
Emagqumeni amathathu ama-Mohawks aqala ukuhlasela ama-postpost aseScott. Ngaphesheya komfula, amabutho aseMelika alindile angazwa ukukhala kwabo kwempi futhi engafuni ukuwela. Efika endaweni yesehlakalo ngo-2: 00 ekuseni, uSaffe wahola amadoda akhe ngendlela ejikelezayo eya ezindaweni eziphakeme ukuze abavikele ezibhamu zaseMelika. Ekhungathekile, u-van Rensselaer uphinde wawela eL Lewiston futhi wasebenza ngokuzikhandla ukuze aqinisekise ukuthi amaphoyisa aqale. Engaphumeleli, wathumela inothi kuScott naseWadsworth ebavumela imvume yokuhoxisa uma isimo sifanelekile.
Ukushiya imisebenzi yabo yasensimini, bakha i-barricade phezulu kwezingqimba. Ukuhlaselwa ngo-4: 00 ekuseni, i-Sheffe yahlangana ngempumelelo. Ezwa ukukhala kweMohawk nokubulawa kwabantu abesabekayo, amadoda akwaWadsworth aphumula futhi ngokushesha azinikela. Ulayini lwakhe lwawa, uScott wabuyela emuva, ekugcineni ebuyela phansi emthambekeni ongaphezu komfula. Njengoba kungekho ukuphunyuka kanye namaMohawks, ethukuthele ngenxa yokulahlekelwa yizinduna ezimbili, ngokulandela, uScott waphoqeleka ukuba anikeze izinsalela zomyalelo wakhe kuShefela. Ngemva kokuzinikela kwakhe, izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu zaseMelika ezazibalekile zafihla zavela futhi zathunjwa.
Inhlekelele kubantu baseMelika, iMpi yase-Queenston Heights yabulala abangu-300 futhi yabulala, kanti abangu-958 bathunjwa. Ukushona kwabaseBrithani kwabulawa abangu-14, abangu-77 balimala, kanti abangu-21 balahlekile. Ababulali baseMelika base-5 babulawe kwathi abangu-9 balimala. Ngemuva kokulwa, abaholi ababili bavumelane ngesibindi sokuphatha abalimele. Ehlukunyezwa, uVan Rensselaer washiya isikhundla sakhe futhi wasuswa esikhundleni sikaSmyth owafaka imizamo emibili yokuwela umfula eduze kwase-Fort Erie.
Umlando Wempi: Impi ye-Queenston Heights
Impi ka-1812: I-akhawunti ye-Battle of Queenston Heights
Amapaki e-Niagara: i-Queenston Heights
Impi Ye-Gulf ka 1990/1
Impi yamaCrimea: Impi yaseBalaclava
Izimpi ZaseRoses: Okubalulekile
Impi Yomphakathi YaseSri Lankan
Ukuhlasela kweSoviet kwe-Afghanistan, 1979 - 1989
I-Atomic Bombings yaseHiroshima neNagasaki, ngo-1945
Isigameko se-Marco Polo Bridge
Ukuzimela KwaseScotland: Impi yaseBannockburn
I-Battle of Ayn Jalut
Impi yokuqala yaseBarbara: iMpi yaseDerna
I-Couverture - Ukumboza
Okushiwo 'Phezu Kwengxenye' eGolifu, Nezilinganiso Zemibuzo
Mayelana nobukhulu nobudala be-Bass eGeorgia
Iyini Inqwaba Ye-Octopus?
Ingabe Kukhona Abaphikisana NoNkulunkulu?
Amasiko ase-Ubadiya - Ukuhwebelana Nezokuxhumana NeMesopotamia
Iyini uMkhosi Wokuzinikezela?
Izingoma eziphezulu kakhulu ze-Doo-Wop Zonke Isikhathi
Isibuyekezo: Michelin Pilot Alpin PA4
Izinkinga ze-Monster Math Word ze-Halloween
'UHarold kanye nePlanti yePrayon' yeSifundo
I-Cancer Sun ne-Signs Moon
I-Macbeth Character Analysis
I-Maritime Lanes Lanes
Izimoto Ezintsha Ezibizayo Ezintshonalanga
I-Butler University Admissions
Amantombazane okuqala aseMelika: Kusukela kuMarta Washington kuze kube namuhla
Okushiwo Izilinganiso Ze-Movie
"Mulatto: Inhlekelele Deep Deep"
Amathiphu ama-10 wokuqonda imibhalo yamafilosofi
Ama-Spanish Amazwi Ngezinguqulo ZesiNgisi
Uthando, Umshado kanye nobuBuddha